Paradox, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Sirta aaminaadda (ama cibaado, cibaado, Bawlos) Bawlos wuxuu ku tilmaamay sirta qarsoon ee ka dambaysa wax walba - shakhsiga Ciise Masiix. 1 Timoteyos 3,16 Bawlos wuxuu qoray: Oo, sida qof waluba qirto, qarsoodiga iimaanka waa weyn yahay: waxaa lagu muujiyey xagga jidhka, xagga ruuxa lagu caddeeyey, malaa'igaha baa u muuqday, wacdiyey dadkii aan Yuhuudda ahayn, dunida oo la rumaystaa, oo dunida laga aqbalay. Sharafta.
Ciise Masiix, oo ah hilibka ku jira jidhka, ayaa noqon kara isdhaafsiga ugu weyn (= is burinaya muuqda) ee caqiidada masiixiga. Hadana layaabna ma leh in isdhaafsigaasi - abuuraha uu qayb ka noqdo abuurista - uu noqdo isha liistada liistada dheer ee iska hor imaadyada iyo waxyaabaha kadhaca ah ee ku xeeran diinteena masiixiga.
Badbaadadu lafteedu waa isku dhac: bani’aadamka dembiga leh waxaa lagu caddeeyay Masiixa denbi la'aanta. In kasta oo aan wali dembaabno Masiixiyiin ahaan, Ilaah wuxuu inoogu arkaa inaan ahayn cibaadada aawadood. Waxaan nahay dambiilayaal hadana waxaan nahay kuwa aan dambi lahayn.
Rasuul Butros wuxuu ku qoray 2 Butros 1,3: 4: Wax kasta oo u adeega nolosha iyo cibaadada wuxuu ina siiyay awooddiisa rabbaaniga ah xagga aqoonta kuwa noogu yeedhay ammaantiisa iyo xooggeeda. Iyaga ayaynu ku leenahay ballanqaadyada ugu qaalisan uguna weyn, si aad ugula wadaagi kartaan dabeecadda rabbaaniga ah ee aad uga baxsatay damaca xun ee adduunka.
Isbarbardhigyo qaar ka mid ah shaqadii gaarka ahayd ee Ciise ee dhulka loogu talagalay dadka oo dhan:
Ciise wuxuu bilaabay howlihiisii ​​markuu gaajaysnaa, laakiin waa cuntada nolosha.
Ciise wuu ku dhammeeyey shaqadiisii ​​dhulka markii uu harraad badnaa, laakiin weli isagu waa biyaha nool.
Ciise wuu daalay oo weliba waa nasashadayada.
Ciise wuxuu cashuurta siiyay boqorka, laakiin isagu waa boqorka xaq u leh.
Ciise wuu ooyay, laakiin isna tirtiraa ilmoheenna.
Ciise waxaa lagu iibiyay 30 gogo 'oo lacag ah, oo weliba wuxuu ku iibsaday madax furashada dunida.
Ciise waxaa loo kaxeeyey neefle sidii adhi oo kale, laakiinse isagu waa adhijirka wanaagsan.
Ciise wuu dhintay isla mar ahaantaasna wuxuu baabi'iyey awoodda dhimashada.
Masiixiyiinta sidoo kale, noloshu siyaabo badan bay iskugu khilaafsan yihiin:
Waxaan aragnaa waxyaabo aan la arki karin.
Waxaan kaga adkaaney dhiibida.
Waxaan ku xukuntana adoo u adeegaya.
Waxaan nabad ku helnaa annagoo qaadanay harqoodkii Ciise.
Waxaan ugu weyneynaa markii aan aad u khushuucsan nahay.
Waxaan ugu caqli badan nahay markaan nacas nahay Masiix aawadiis.
Waxaan noqonaa kuwa ugu xoogga badan markaan nahay kuwa ugu liita.
Waxaan ku helnaa nolol innagoo lumineyna nolosheenna Masiixa aawadiis.
Bawlos wuxuu ku qoray 1 Korintos 2,9: 12: Hase yeeshe, sida qoran: Wax aan ishu arag, dheguna ma ay maqal, oo nin qalbigiisu kuma haysto waxa Ilaah u diyaariyey kuwa isaga jecel. Laakiin Ilaah wuxuu inoogu muujiyey Ruuxiisa; maxaa yeelay, maanka ayaa wax walba baara, oo ay ku jiraan qoto dheerida ilaaha. Waayo, bal yaa garanaya waxa binu-aadmiga ku jira siduu yahay ruuxa keliya ee binu-aadmiga ku jira? Sidaa darteed qofna ma oga waxa ku jira Ilaah mooyee laakiin Ruuxa Ilaah oo keliya. Laakiin innagu ma aannu helin ruuxa dunida, laakiinse Ruuxa Ilaah ka yimid inaynu garan karno wuxuu Ilaah ina siiyey.
Runtii, sirta aaminaadda ayaa weyn. Qorniinka dhexdiisa, Ilaah wuxuu naftiisa inoogu muujiyey inuu yahay Ilaah keliya - Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Iyo Wiilkii ina dhalay, kan innaga dhexdeenna ah ee ina hagaajiya Aabbaha ina jecel, waxaynu yeelannaa wehel keliya oo aan Aabbaha ahayn, laakiin weliba midkeenba midka kale.